Tsvaga zvekuona muWales, United Kingdom | Bezzia
Chii chekuona muWales, United Kingdom
Susana Garcia | 24/03/2021 10:00 | Lifestyle, famba
Wales chikamu cheUnited Kingdom uye ndechimwe chezvikamu zvakanakisa zvatinoona. Kutora rwendo kuburikidza nenzvimbo yekumaodzanyemba iyi chinhu chinonakidza, nekuti tinowana inoshamisa nharaunda nemisha yakanaka. Inozivikanwa nekuve nyika ine dzimba zhinji, sezvo yaive nzvimbo yakachengetedzwa kwazvo, asi zvakare nemaguta madiki uye anoyevedza nenzvimbo dzinozotora mweya wedu.
Chaizvoizvo zvakakosha funga rwendo kuenda kunzvimbo yeWales, sezvo tichadanana nenzvimbo ino. Rumwe rwenyika diki kwazvo muUnited Kingdom asi iro harina chinhu chekugodora vamwe. Tiri kuenda kunoona dzimwe dzenzvimbo huru dzekushanyira muWales.
1 Cardiff, iro guta guru
2 Swansea, guta rake rechipiri
3 Conwy, guta rinofadza
5 Llandudno, nakidzwa nemaitiro eVictorian
Cardiff, iro guta guru
Cardiff ndiro guta guru reWales uye nekudaro inofanirwa kuona. Iyo inomira pachena kune yayo castle kufambidzana kubva panguva yekutonga kwevaRoma, kunyangwe yakagadziriswa kwakawanda uye zvinowedzera munhoroondo yese. Isingarasikirwe neClock Tower uye iyo Animal Wall. Tevere tinokwanisa kushanyira nharaunda yeCastillo, inova ndiyo nzvimbo yayo yekutengesa uye ine hupenyu. Zvakare kukosha kuona ndeye yakanaka Bute Park, imwe yemapaki eguta makuru eUK, iri parutivi peRwizi Taff. Shanyira makara ekare akanaka Iyo Royal Arcade, nzvimbo yekuwana zviyeuchidzo uye zvekare. Inoenderera nekushanya kuCentral Market kunoona zvakajairika zvigadzirwa uye yayo Nhoroondo Museum.
Swansea, guta rake rechipiri
Iri ndiro guta rechipiri rakakura uye rakakosha muWales, richiita imwe nzvimbo yekushanyira. Pakati payo pakavakwazve mushure meChipiri Hondo Yenyika nekubhomba. Unogona kuona Castle Square uye shanyira Oxford Street, nzvimbo yayo yekutengesa. Inotaridza zvakare musika wayo muhombe, ine yakanakisa gastronomic zvigadzirwa zveWales. Mune ino nzvimbo iwe unofanirwa kuongorora yaro yakanaka bay uye kupfuura neMumbles Lighthouse, yayo inozivikanwa lighthouse.
Conwy, guta rinofadza
MuWales tine madhorobha madiki anoyevedza, seConwy muNorth Wales. Guta rakakomberedzwa iro rakaziviswa seNyika Heritage Nzvimbo. Iyo inomiririra kunze kwayo inoshamisa XNUMXth century castle izvo pasina mubvunzo zvinokwezva kutarisa kwedu uye izvo zvichiri kuchengetedza chikamu chemadziro ayo. Mune iyo villa unogona kuona iyo Plas Mawr imba ine yakanaka Elizabethan mapurani. Tinogona zvakare kushanyira imba diki diki inoyevedza kuGreat Britain nenzvimbo yechiteshi, yakanaka kwazvo.
Iyi paki yakanaka yenyika iri mu Northwest Wales yakazara nemakomo, mipata, nyanza uye mapopoma emvura. Iyo nzvimbo isingangoshamisi chete kana tikapfuura napo, asi zvakare iri paradhiso kune avo vanoda kuenda kunofamba pakati pezvisikwa. Mune paki iyi pane Mount Snowdon, pakakwirira pakakwirira muEngland, pamwe chete nemamwe makomo epasi akakodzera kune vanotanga kukwira makomo. Maererano nengano, pamusoro pegomo pane ogre Ritha Gawr, akaurayiwa naMambo Arthur.
Llandudno, nakidzwa nemaitiro eVictorian
Aya ndiwo mamwe emataundi anoyevedza eNorth Wales, nzvimbo ino zvakare nzvimbo huru yezororo kuUnited Kingdom. Kune tramu huru inokwira kumusoro kweguta. Kuve inzvimbo yekutenderera yakadaro tinoziva kuti tichawana ese marudzi ese masevhisi, kubva kuzvitoro kusvika kumaresitorendi, mahotera nemakamuri. Inozivikanwa yeayo yakashongedzwa promenade, asiwo yeVictorian-dhizaini zvivakwa. Zvakare, zviri pachena kuti yaive pano apo Lewis Carroll akasangana neLondoner diki uyo akamukurudzira kuti aumbe 'Alice muWonderland'.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Chii chekuona muWales, United Kingdom
Chii chinonzi Houdini syndrome?